Ushiye isigubhukane oKhozini uZandile
UZANDILE Tembe, obengumphathi wezinhlelo emsakazweni, Ukhozi FM, osekuvele ukuthi udube umsebenzi, wahamba singakafiki isikhathi njengoba bekulindeleke ukuthi ashiye ekupheleni kwenyanga kulo msakazo. ISITHOMBE: TWITTER
Nokubongwa Phenyane | October 6, 2021
USHIYE isigubhukane obengumphathi wezinhlelo emsakazweni Ukhozi FM, uZandile Tembe obekulindeleke agcine ekupheleni kwale nyanga ngokwenkontileka yakhe.
Ngeledlule kunqanyulwe inkontileka kaZandile noKhozi kanti bekufanele agcine ekupheleni kuka-Okthoba kodwa kuthiwa ushiye isigubhukane ngoMsombuluko.
UZandile ubesesebenze kulo msakazo iminyaka engu-13, wafika khona enguphrojusa wagcina esengumphathi wezinhlelo.
Umthombo ongaphakathi kulesi siteshi uveze ukuthi uZandile uyalelwe ngabaphathi ukuthi ngeke esayiqedela inyanga, kumele agcine ngoMsombuluko.
Lo mthombo uthi lokhu kungenxa yokuthi njengoba uZandile esesikhundleni sokuba yimeneja, uvuleleke ukuthola imininingwane eyimfihlo yenhlangano yezokusakaza nesiteshi, yingakho kuthiwe akagcine ngokushesha nokuyinto evame ukwenziwa yizinkampani uma kuhamba isikhulu noma imeneja ethize.
Omunye umthombo uthe kumangale abaningi uZandile esefika ethatha izimpahla zakhe ehhovisi abesebenzela kulona, washaya wachitha.
Umthombo uqhube wathi kuthe kungazelele muntu wasuswa nakwiWhatsApp yabasebenzi, ekhishwa ngumphathi wesiteshi, uSbongi Ngcobo.
“Ufike ekuseni wonke umuntu wacabanga ukuthi uze emsebenzini njengenjwayelo njengoba abanye bethu sebebuyele ekusebenzeleni ehhovisi. Ufike wangaba nasinqe, waqoqa zonke izimpahla zakhe wahamba.
Kusenjalo kubonakale esekhishwa wuSbongi kwiWhatsApp yasemsebenzini,” kusho umthombo.
Uqhube wathi besamangazwe yilokhu, kube sekumenyezelwa uMandla Mdletshe njengozobamba esikhaleni sikaZandile. Isolezwe lake labika ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwalaba bobabili nokuthiwa kuze kwahlukanisa phakathi abasebenzi.
Isolezwe likhuluma noZandile, unxuse ukuba kuxhunywane neSABC.
UGugu Ntuli, okhulumela iSABC, ukuqinisekisile ukuthi uMandla usenikwe esokubamba njengomphathi zinhlelo kulesi siteshi kuze kube khona obekwa kulesi sikhundla ngokusemthethweni.
Abaphendulanga mayelana nokushhiya isigubhukane kukaZandile.